Baahin: Khamiis, Apr 28, Weriye Khadar Cawl ~ Daljir ~ Buuhoodle. Galkacyo: Hoggaamiye dhaqameedyo dhalleeceeyay dhacadadii shalay, isla markaana ku baaqay adkaynta amniga … Buuhoodle: Issimada & maamulka gobolka Cayn oo ugu baaqay ardaayada ku dagaalamay Galkacyo in ay colaadda joojiyaan … Qardho: Madaxweynaha Puntland & wafti uu hogaaminayo oo si weyn loogu soo dhaweeyey Qardho; Yoonis Cali Faarax, ku xigeenka Gudd. gobolka Karkaar ayaan waraysanay … Garbahaarey: Ciidanka dawladda Federalka oo qabsaday magaalada Garbahaarey, Gedo; Col. Farey, taliyaha ciidanka dawlada ayaan waraysanay … Garowe: Wasaarada qorshaynta ee Puntland oo daah-furtay daraasad sahan ah oo lagu baarayo nolosha aasaasiga ah ee bulshada; Agaasimaha wasaarada ayaa tafaasiil ka bixiyey ujeedada daraasadda … – Radio Daljir
Baahin: Khamiis, Apr 28, Weriye Khadar Cawl ~ Daljir ~ Buuhoodle. Galkacyo: Hoggaamiye dhaqameedyo dhalleeceeyay dhacadadii shalay, isla markaana ku baaqay adkaynta amniga … Buuhoodle: Issimada & maamulka gobolka Cayn oo ugu baaqay ardaayada ku dagaalamay Galkacyo in ay colaadda joojiyaan … Qardho: Madaxweynaha Puntland & wafti uu hogaaminayo oo si weyn loogu soo dhaweeyey Qardho; Yoonis Cali Faarax, ku xigeenka Gudd. gobolka Karkaar ayaan waraysanay … Garbahaarey: Ciidanka dawladda Federalka oo qabsaday magaalada Garbahaarey, Gedo; Col. Farey, taliyaha ciidanka dawlada ayaan waraysanay … Garowe: Wasaarada qorshaynta ee Puntland oo daah-furtay daraasad sahan ah oo lagu baarayo nolosha aasaasiga ah ee bulshada; Agaasimaha wasaarada ayaa tafaasiil ka bixiyey ujeedada daraasadda …